युवा निराश कहिलेसम्म ?-Nagarikaawaj.com
युवा निराश कहिलेसम्म ?
email–: [email protected]
– विवीएस अध्ययन गर्दा झण्डै उनले ४ वर्षको समय बुटवलमै खर्चिनुप¥र्यो । गुल्मीवाट वुटवल आएर डेरा वसि अध्ययन सँगै सामान्य पकेट खर्चका लागी सुजन पन्त यहाँको एउटा विस्कुटको डिलरमा काम गरे । त्यसले उनलाई अझ सन्तुष्ट दिएन । मासीक ७।८ हजारले पुगेपनि कम्प्युटर सम्वन्धी कुनै कोर्ष सकाएर थप वढि आम्दानी गर्न सकिन्छकी भन्ने साथीहरुको भनाई सुन्नासाथ कम्प्युटर वेसीक कोर्ससँगै कम्प्युटर हार्डवेयर देखी अन्य कोर्षहरुपनि सकाए । यसको विचमा उनले रेडियोमा आर.जे. वन्ने सुर चलेपछि वुटवलमै एक ईस्निस्टिच्युटमा पुगेर तालिम पनि लिए । तर उनी बुटवलमा वसेको यो चारवर्षमा भविष्य वन्छ जस्तो देखेनन् । अव उनी विदेश जाने सपना सहित कहिले काठमाण्डौं, कहिले गुल्मी कहिले वुटवल गर्न थालेका छन । कारण केही समय अघि कोरीयन भाषा परिक्षामा उत्तीर्ण भएर अहिले भिसाको प्रर्खाईमा छन । यदि भिसा आयो भने उनि कोरीया पुग्नेछन् । तर कोरीया जान सोच पनि नितान्त आफ्नो भने हैन । सुरु सुरुमा विदेश जान हुदैन, यहि केही गर्नेहो भन्ने सुजन अहिले किन कोरीया जादैछन त ? उनि भन्छन्, –‘नेपालमा जति काम गरेपनि जति पढेपनि केही हुदोरहेनछ, एक पटक विदेश गएर आएपछिनै केही गर्नुपर्ला ।’
विदेशको पिडा र दुःख यहाँका जनार्दन वश्याललाई पनि छ । उनि पनि विदेश जाने सोचमा छन । यदि प्रोसेस गरेको जापानवाट भिसा आयो भने उनि पनि त्यतै हानिदैछन । फर्साटिकर घर भएका उनि केही समय वुटवलमा कोठा भाडामा लिएर अध्ययन गरे । व्याचलर अधययनका लागी खर्चपनि र्गुगरे । पास हुन सकेनन । अनि नेपालमा केही छैन, केह ीगर्न सकिदैन । पैसा कमाउन सकिदैन भन्ने सोचका साथ विदेश जान खोजेको उनि वताउँछन । उनि दुईजना पात्र मात्रै हुन । जति मिहेनत गरेपनि नेपालमा असन्तुष्ट धेरै युवाहरु छन ।
विशेष गरि गाउँवाट शहर वजारतिर आफ्नो भविष्य वुनेर झरेका युवाहरु त्यो सपना यहाँको वातावरणले पुरा हुन सक्दैन् । सानैदेखीको सपना र लक्ष्य यहाँ आएपछि भताभुङ पार्छ युवा अनि नयाँ सपनाको साथमा एक्कासी ठुलो सपना वुन्दै विदेशीन वाध्य छ । साच्चीकै भन्नेहो भने पछिल्लो समय युवाहरुका लागी शहरवजार एउटा चौतारी जस्तै वनेको छ विदेश जाने । यहाँको वातावरण र उदिकलाग्दो निराशा प्रतिफलले यहाँ वस्न नमानेको महसुस गर्न सकिन्छ ।
भनिन्छ, युवा समाज परिबर्तनका संवाहक हुन । युवामा हुने तत्परता र आत्मविश्वासले समाजलाई बाटो देखाउने काम गर्दछ । परिवार तथा राज्यले एउटा बालकलाई युवक बनाउन प्रत्यक्ष –अप्रत्यक्ष थुप्रै लगानी गरेको हुन्छ । सबैको आशा हुन्छ, बालकलाई आत्मविश्वासी, स्वस्थ तथा सक्षम युवा बनाउने । त्यसका लागि हर अभिभावक आफ्ना खुशी कटाएर उसको खुशीका लागि खर्चेका हुन्छन्, तर, फुल लागे जस्तै फल लागे पो भने जस्तै भएको छ हामीकहाँ । कतैवाट पनि सकारात्मक प्रतिफल छैन युवाहरुमा । अध्ययन सकाउँछ त्यस अनुसारको रोजगार पाउदैन । एउटा कुनै कुरामा भविष्य देख्छ, पछि त्यही अवसरवाट पनि ढुक्क वदैन युवा । अझ भन्नेहो भने युवा अडिगनै छैन । कारण ?, नेपालमा भनेजस्तो रोजगारी छैन । व्यवसाय गर्नेहो भने भनेजति आर्थिक सहायता छैन । धेरै जोखीम छ व्यवसायमा त्यो जोखीमलाई सरकारले सहयोग गर्दैन । अनि वाध्य हुन्छ युवा विदेशनै जान ।
कहिलेकाही आफ्नो स्वार्थका लागी राजनैतिक दलका नेताहरुले युवाहरुलाई उचाल्छन अनि स्वार्थ पुरा भएपछि वास्ता गर्दैनन् । अनि जाने वाटो त्यही विदेश । गर्ने काम त्यही दुःख । कतैवाट पनि युवाहरुको वारेमा आवाजनै उठ्दैन । युवाहरुका समस्याका वारेमा कसैले वोल्दैन । कसैले सुन्दैन । त कसैले पहलनै गर्छ ।
अपेÔाका विपरीत आशामा तुÈारापात भएको छ युवाहरुका । सबैका आशा निराशातिर ढल्किदैछन् । जताततै शिÔित युवा बेरोजगार वन्दै गएका छन् । केही समय अघिको एउटा तथ्याकंकै कुरा गरौन । एक घण्टामा करिब ३३ युवा वैदेशिक रोजगारीको लागी काठमाण्डौको अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलवाट उड्ने गर्दछन् । त्यो संख्या महिनामा करिब चौबिस हजार हुन्छ । तर खुला सिमाना हुदै भारतमा रोजगारमा जानेको संख्या अझै भन्दा बढि हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । केही वढि रकम जुटाउन खोज्नेहरु प्लेनवाट राम्रो देशको लागी पहल गर्छन कम पैसा र स्तर भएकाहरु स्थलमार्ग हुदै ।
नेपालमा प्रत्येक वर्È करिब चार लाख युवा श्रम बजारमा अवसरमा प्रवेश गर्ने गर्दछन् तर त्यसको आधा भन्दा बढि संख्या बेरोजगार नै रहन्छ यसरी देश बाहिर जाने र देशमै बेरोजगार हुनेमा सबैभन्दा बढि १७–३५ उमेर समहुका भएको अनुमान गरिन्छ । युवा रोजगारीको यस्तो डर लाग्दो दृश्य सार्वजनिक भइरह“दापनि नेपालको नीति निर्माता र राजनीतिक समुदाय भावी प्रधानमन्त्रि को हुने, अवको सरकार कस्ले चलाउने, कुन मन्त्रालय कस्को पकडमा तान्ने र आफ्नो नजिकका व्यक्तीहरुलाई राम्रा रामा ठाउँमा प्रवेश गराउने आदि ईत्यादी बहसमा व्यस्त छन् ।
युवाहरुका विषयमा केही गर्छन कि भन्ने युवा नेताहरुलाई ठाउँनै छैन । युवाहरुका वारेमा वुढा नेताहरुलाई सोच्ने फुर्सदै छैन । अझ भन्नेहो भने वुढा नेताहरुलाई कुनै कार्यक्रममा यसबारेमा प्रतिक्रिया माग्नेहो भने प्रतिक्रिया दिन जा“गर सम्म पनि देखाउन सक्दैनन । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव प्रचारप्रसारमा पनि नेताहरुले युवाहरलाई साह्रैनै प्रयोग गरे । जहाँ जुन कार्यक्रममा पनि युवाहरुकै वारेमा आफु र आफ्नो पार्टि गम्भीर वनेको र नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका वकवास कुरा गर्छन । अहिले संविधानसभाको वैठक भैरहदा त्यहाँ युवाहरुका विषयमा एउटा शव्द पनि कुनै नेताहरुवाट निस्कदैन । यसैले पुष्ट्रि गर्दछ नेपालका राजनेताहरु नेपाली युवा र तिनको भविष्यको बारेमा कत्तीको चिन्तित छन् भन्ने कुराको । यो देशको विडम्बना दाँतै फुक्लेका र दाह्री जुगाँ फुलेका नेताहरुलाई युवा नेताका रुपमा लिईन्छ हिसाबै गर्ने हो भने हामी जस्ता २२, २५ वर्षीय युवाहरले उनिहरुलाई हजुर बा भन्नेहो भने फरकनै पर्दैन ।
सकेसम्म त नेपालकै केही गरौ भन्ने सोच अधिकासं युवाहरुको हो । तर यहाँवाट पार नपाएपछि वाध्यताले विदेशीनुपर्छ भन्छन युवाहरु । अनेकौ दुःख पिडा र दर्दहरु भोग्दै आफ्नो रगत र पसिना सँग पैसा साटेर घर परिवारलाई सुख दिने चाहाना अधुरै रहन्छन् कैयन युवाको । हो त्यहा“ पक्कै सुख छैन, बुटवलका कमल न्यौपानेले केही समय अघि भनेका थिए, अहिले विदेश गएपछि भन्छन्, –‘यहाँ त साह्रै दुःख छ सर, ज्यान जोखीममा पारेर भएपनि काम गर्नुपर्छ ।’ अझ उनले यो पनि भन्न छुटाएनन,–‘वरु त्यही १०–१५ हजारको तलव भएपनि किन नहोस्, त्यही ठिक छ युवाहरु नेपालमै केही गर्नुपर्छ ।’ हरेक कुरा भोगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । विदेशवाट फर्किएका र त्यहाँ गएपछि हरेक युवाले दुःख नै पाएका कुरा गर्छन् । कमल न्यौपानेको फेसवुक स्टाटसले पनि केही सोचनिय वनाउँछ ।
‘हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले ।
साग र सिस्नु खाएको वेस आनन्दि मनले ।’
युवाहरुलाई सधै स्वार्थमा मात्रै प्रयोग गर्ने युवाहरु पनि अव गम्भीर वन्न जररी छ । नेताहरुले स्वार्थका लागी हामीलाई प्रयोग गरेको भन्ने कुरा पनि उनिहरलाई थाहा छ । तर यहाँको वेराजगारीमा दुई चार पैसा दिए युवा उनिहरुलाई सपोर्ट गर्न पछि पर्दैन । युवा भविष्यका कर्णधार र नेतृत्वकर्ता हुन् । राष्ट्रका सान, मान, मेरुदण्ड हुन् । आजका भौतिक, भविष्यका बौद्धिक सम्पत्ती हुन । युवा विनाको राष्ट्र र रस विनाको फल उस्तै उस्तै हो । युवा परिवर्तनका सम्वाहक पनि हुन । योजना कार्यान्वयनका गतिला शक्ती हुन । आमाबाबुका लागि जसरी छोराछोरी जीवनका साहारा हुन्छन्, त्यसरी नै युवा राष्ट्रका सहारा हुन् । युवा विनाको राष्ट्र शक्तिविहिनप्राय हुन्छ । तर अचम्म र दुःख लाग्ने । नेपालमा युवाहरुको वास्तानै छैन नेतृत्वकर्ताहरुको । दैनिक सयौ युवाहरु विदेशीएको कसैले देख्छ न कसैले सुन्छ । न युवाहरुले पाएको दृखनै ।
नपढेका हैनन । पढेका युवाहरु नेपालमा जतिपनि छन् । तर जताततै शिÔित युवा वेरोजगारको बढ्दो तथ्याङक, हत्या, हिंसा र अपहरण जस्ता कार्यमा युवाको सङ्लग्नताको सङख्या बढ्दो र अदÔ युवाको विदेश जाने भिडले हाम्रो समाजलाई कता लैजादैछ ? युवा बिना राज्यको भविष्य कस्तो हुने हो ?, यस्ता यावत विषयहरुमाथी राज्यले घात्लिए सोच्नुपर्नेहो तर अह“ सोच्दैन ।
स्नातक तहदेखि स्नातकोत्तरसम्मको शिशिक्षा हासिल गरेका युवा वर्ग मिहिनेत गरेर स्वदेशमै केही गरौं भन्नुभन्दा विदेश पलायन हुन पाउनुमा आपूmलाई सौभाग्य ठान्ने गर्छन । लोक सेवाबाट शाखा अधिकृतमा नाम निस्कनेभन्दा कोरीयाको भाÈा परीÔामा छनौट हुनु तथा अमेरीकाका लागि डि.भी. पर्नु सर्वाधिक महत्वको विÈय हुन थालेको छ । देश र परिवारले आफ्नो भविष्य खोजेको युवा वर्ग मिहेनतभन्दा चिट्टा पर्नुलाई महत्व दिनुपरेको छ । कारण यहाँको अन्यौलता नै हो । केही छैन, यहाँ जति गरेपनि केही हुदैन यहाँ । केही गर्न खोज्छ तर सक्दैन युवा । कतैवाट पनि सहयोग छैन, हौसला छैन । युवा केन्द्रित कार्यक्रम छैन । तर अब युवाले राज्यको मुख ताकेर बस्ने हैन कि आफुले पनि केह ीगर्न सक्छु भन्ने जोश र जाँगरका साथ अघि बढ्न सक्नुपर्छ । युवा परजीवि हैनन् र हुने पनि छैनन् । आफ्नो मेहनतबाट गर्नसक्ने र हुने काम गरेर युवाले नै अब देशको भविष्य उज्ज्वल पार्नतर्फ अघि बढ्नु पर्ने मूलुककै आवश्यकता हो । विदेश जानका लागि पासपोर्ट बनाउनेतिर लाइन लाग्ने हैन कि अब हामी युवा आफ्नो भविष्य निर्माणका लागि नयाँ नयाँ योजना बनाएर, हाम्रै देशमा केह ीगर्न सकिन्छ भन्ने भावनाका साथ क्रियाशील हुनुपर्ने समय आएको छ । डीभी चिठ्ठाको लाइनमा पालो पर्खेर बस्ने हैन कि आफ्नै देशभित्र बसेर देशकै हितमा आफ्नो हित सोचेर नयाँ नयाँ योजनाहरु बनाउन सक्छु भन्ने भावना लिएर अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो देशमा संभावना र अवसर नभएकै हैनन् । संभावना जति पनि छन्, त्यसलाई प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ । राज्यले युवालाई केन्द्रित गरेर ल्याएका सानातिना अवसरहरुलाई सदुपयोग गर्नसके पनि हामी देशमै स्वरोजगार हुन सक्छौं । निराशावादी सोंच त्यागेर आजैदेखि आशाको दियो बालौं भन्ने कामना गरौं ।